VEELOOMOO UFFATA AADAATU CAALAATTI CIDHA BAREECHA? -Bilisummaa kumaa’tiin!’Waan Dubbifamuu qabudha! – Beekan Guluma Erena
VEELOOMOO UFFATA AADAATU CAALAATTI CIDHA BAREECHA? -Bilisummaa kumaa’tiin!’Waan Dubbifamuu qabudha!	Beekan Erena
Poems June 19, 2016OROMO
145SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Veeloo moo uffata aadaatu caalaatti cidha bareechaa?
Waan hundumaa caalaa nageenyatu dursa!…akam jirtu Oromoonnikoo kallattiiwwan garagaraa addunyaa kanaa irra jirtan marti?…nagaa keessanii?…nageenyi badhaadhaa? Anillee waaqayyoof haa galatuutii nagumakooti. Maarreekaa,anis akkuma amalakoo har’as mata duree tokko qabadhee isiniif dhiyaadheeraatii na caqasaan isiniin jedha?
Akkuma marti keenya beeknu,dhalli namaa ni dhalata,ni guddata,guddatee manas godhata,bu’aa bayii jireenyaa hundas jaalala dabalatee abbaa manaa fi haadha manaa ta’ee waliin dhandhama jireenyaa dhandhamachaa gaafa guyyaa tokko tokkoon biyyoo keessaa uumametti deebi’ee biyyoo ta’a.
kana keessattimmoo dhalli namaa addunyaa kanarra jiru biliyoona torbaa ol yoo ta’u,hundaafuu maqaan ‘dhala namaa/human beings/የሰው ልጅ/’ jedhamee waamamus haalli jiruuf jireenyaa namoota addunyaa kanaa garaagaradha!…kaan gadadoon simtee jireenyaaf du’a gidduudhaa munyuuqaa,kaanimmoo jiruun tolteefii lafayyuu jibbee manas dhagaan ijaaree achi-ol samii jalatti baqata. Kaanimmoo hanga takka jiruusaa fooyyeffachaas isa rakkataas hanga tokko caalee,isa samii jalaas hanqatee otuma waaqaaf lafas komatuu jiraata. Kaanimmoo,kanuma waaqni isaaf kenne tole jedhee itti gammadee “hunduu gaarummaadhaaf!..” jechaa jiraatus baay’eedha…safuu,jireenya kanaaf!
As keessatti,namni ga’eessi tokko umriinsaa gahee nama jaalate tokko ni kaadhimmata,itti aansees walii galtee isaaniif maatii booda akaas aadaa biyyaaf naannootti nama jaalate san ni fuudha,waliinis jireenya eegala,daa’imas godhatee wal horee lafa guuta.
Namni yeroo gaa’ela godhatu waan hedduutu jira.kanneen keessaa nyaataaf dhugaatii dabalatee adeemsi gaa’ilichaa bakkaa bakkaa bakkatti aadaan hanga tokko garagara ta’us akkaataa wal fakkeenyaatiin uffatni gaa’elaa isa adda dureen eeramudha.
Uffata yeroo jennu,uffanni gaa’elaaf barbaachisu gosa lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya:
1-uffata aadaa fi
1-Uffata aadaa gaafa jennu,caaseffamnii fi haalli itti hojjetamuu kan duriirraa adda ta’us,bifa miidhagaaf hawwataa ta’een ammayyoomee gabaarra ooluun jaalattoota aadaa sabaa fi sabboontotaan akka fayaadamuuf keewwameera.
2-Uffata ammayyaa gaafa jennummoo uffata duris ta’ee yrtuma dhihooyyuu hawaasa keenya keessa hin jirre,otoo hin beekiin aadaa faranjii karaa foddaa Tv’n agarree uffachuun aadaa keenya lafa goonee kan ormaa ittiin leellisnudha.
Kunimmoo 100% dhugaadha,aadaa keenya dagannee aadaa ormaa leellisuun imaanaa abbootiin keenya wareegama hedduu itti kaffalanii har’aan gahuun nu dhaalchisan,otoo hin beekiin salphumatti gatuun koloneeffatamnee kan alagaa dhuunfannee kan ofii sadarkaa gidhannerra geenyeerra!…
Waayee uffata aadaatti gaafa deebinu,yeroo ammaa kanatti uffatni aadaa
-kan yeroo ayyaana waggaa uffatatamus ta’ee
-kan yeroo fuudhaaf heerumaa uffatamu gosa gosaan jaalattoota artiif aadaa Oromootiin dizaayinni isaa haala nama hawwatuun hojjetamee bittaafis,kireeffamuufis lafa kaayameera!
Nuti garuu uffata miidhagee lafa kaayamee nu eegu kana dhiisnee,kan yeroo kaanii haa hafuutii gaafa gammachuun keenya addaa,gaafa gaa’ela keenyaallee uffata aadaa keenya ibsu dhiisnee VEELOO faranjiitti ol rarraana. Maaliif?…an hin beeku!…wallaalummaa haa ta’uu,qarooma haa ta’uu gaaffii guddaa naaf deebi’uu didedha!
Adeemsumti fuudhaaf heerumaayyuu karaarraa badeerahoo!
Warri keenya aadaadhaan wal fuudhan har’a nutti qaana’aniiruum!
*Dur safuutu jira,har’a safuun badee dubartiin gaafa gaa’elaa durbummaa qabaattee dargaggeessi lafa dhiitaa bulu har’a dubbiin garagalee inumaa dura dubbiin dhumee dubartiin Ulfaan heerumuu jalqabdeetti!..
*Dur safuutu jira,dubartiif dhiirri wal fuudhan karaa aadaatiin seera eeggatanii waliin gara mana gurbaa deemu,har’a garuu tokko konkolaataarra dhaabatee,tokkommoo lafa dhaabatee akkuma harma haadhaa hodhanitti uummata fuuldura dhaabatanii hidhii wal xuuxu!.. Kunis ajaa’ibumaam!
Dur safuuf aadaatu jira,jaarsoliin biyyaa fi abbootiin Gadaa naannoo ka’anii wal kaasanii Eebbaan guyyaa gaa’ilaa jalqabanii cidhis eebbaan xumurama!…safuu!…har’a jaarsi irraanfatamee,lafatti ilaalamee waltajjiin kan gurbaaf intalaa qofaa ta’ee jaruma lamaantu dungoo fi dhungoodhaan lafa cira!…banneerraam,hin jirruu dhiiroo!…maali kun hundisaa?…
Maal kana qofaree,waan hedduutu sababa ammayyummaatiin nu jalaa badeem!
Ilaamee jara keenya,akka goonuu,kan darbe darbeeraatii fuuldurumaafuu aadaan bade akka deebi’uuf,kan jirummoo akkuma cimuufuu seera aadaaf duudhaa keenyaa eegnee gaa’ela keenya haa raawwannu!
Uffata aadaa keenyaan faayamnee,ijaaf qalbii hawaasa keenyaa keessatti ilaalcha guddaa kabajaan guutame argachuun salphaadha.”veeloo malee hin heerumu…suufii malee hin fuudhu…veelootu irra cidhakoo bareecha…” hololli jedhu hafee “aadaakootiinan boona…ani sabboonaa/tuu Oromooti….Uffata aadaakootu na ibsa,isumatu dhiigakooti….imaanaadhaan natti laatame…dhiigaan dhufe!” Jennee dhugaa jiruun miidhagner,faayamnee uffata aadaatiin cidha keenya haa miidhagfannuun dhaamsakooti.
Eeyyeen,uffatuma aadaakootu na ibsa,aadaankoo ibsituu eenyummaakooti!
Aadaakoo ani yoon kunuunsee dhalootaaf labata dhufuuf hin dabarsine, eenyutu aadaakoof kabaja kennee boruuf dhaloota itti aanuuf dabarsa jennee of gaafannee abbummaadhaan aadaa keenyaaf dursa kennuun dirqama dhaloota amma jiruu akka ta’en isin hubachiisa!
Galatoomaa! Horaa bulaa!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa145SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← ABJUU-Abonketi D Fayissa’tiin -Mudannoo Ajaa’ibsiisoo
HAADHA ORMAA-Yeeyyis Birruu Nagaroo →